FANAMBARANA : Confédération des Syndicats des Grands Corps de l’Etat Malagasy Elargie – MyDago.com aime Madagascar
FANAMBARANA : Confédération des Syndicats des Grands Corps de l’Etat Malagasy Elargie
Manoloana ny zava-mitranga eto amin’ny firenena, ary mba hisorohana ny fihamafisan’ny savorovoro sy ny mety ho ady anatiny eto amin’ny firenentsika, izahay eto anivon’ny » Confédération des Syndicats des Grands Corps de l’Etat Malagasy Elargie » dia manao izao fanambarana manaraka izao :
Melohinay tanteraka ny fandratràna, fitifirana izay niafara tamin’ny fahafatesana izay nihantra tamin’ireo mpianatra Malagasy izay ho avin’ny Firenenintsika. Midika ve ireny fa tsy afaka haneho hevitra malalaka intsony ny Malagasy eto Madagasikara?
Mba hisorohana ny fiverimberenan’ny trangan-javatra tahaka ireny, dia mbola manantitra etoana ireo fangatahana efatra izay nataonay tamin’ny 2 janoary 2014, izay nanambara fa tokony hatao ny fampitahana ireo « Procès Verbale », ary ny fanamarinana ny fampiasaina ireo bileta tokana na niasa na tsy niasa.
dia manentana ireo tomponon’andraikitrikitra isan’ambaratongany indrindra fa ireo rahalahy sy anabavy ao amin’ny CES izahay, mba tsy hatahotra handray ny andraikitra tandrify azy, mba hanehoana marina ny safidin’ny vahoaka Malagasy hitsara araka ny lalàna, ny rariny sy ny hitsiny araka ny fiainianana nataonareo. Mpiasam-panjakana mitovy isika, iray vatsy iray aina.
Zava-dehibe loatra amin’ny ho avin’ny Firenena iny fifidianana notontosaina farany teo iny. Ka tsy tokony hisalasala isika mianakavy handray ny fepetra rehetra tandrify izany; ka handalina sy hamakafaka tsara, mba hisorohana ny krizy vaovao indray.
Eto am-pamaranana, dia manao antso avo amin’ireo rahalahy sy anabavy mpitandro ny filaminana eto amin’ny firenena izahay, izay tandroka aron’ny vozona. Mpirahalahy mianala isika, ary mifampiankina. Maniry izahay mba tsy ho atao fitaovana politika isika fa kosa tena hijoro « hiaro ny vahoaka sy ny fananany ».
« SERY VITAN’ANAMALAHO VE DIA HAMONOANA VANTOTR’AKOHO ? »
Natao teto Antananarivo anio 15 janoary 2014.
Ny mpitondra teny
Docteur NDATASON Frédéric
Cst Naika Eliane : aleo ny samy Malagasy no hiresaka
HANAO FANAMBARANA LEHIBE NY PARLEMANTERA ANKOLAFY RAVALOMANANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 15 janvier 2014 Catégories Politique
3 pensées sur “FANAMBARANA : Confédération des Syndicats des Grands Corps de l’Etat Malagasy Elargie”
16 janvier 2014 à 5 h 59 min
Hijoro isika vahoaka @ fiarovana ny safidin-tsika.Tsy maintsy atao ny cofrontation ny pv,ny buletin,ny liste.Ka raha vao mitifitra ny EMMOREG/EMMONAT.Hita_tsika ny misy ny trano fonenany(zandary,miaramila,polisy)ny vady aman_janany, sekoly ianarany
Mangataka sy miangavy anareo mba hamoaka io fanambaràna io amin’ny teny anglisy sy frantsay ê ! Tsara mba ho fantatr’izao tontolo izao ny hevitrareo !
Ny vahoaka malagasy koa, efa leo fanambaràna tsy misy tohiny na hetsika mafonja !
17 janvier 2014 à 6 h 49 min
D miandry ny tohiny zay ny Vahoaka eee,aoka kosa tsy ho vitan n eo ambony latabtra eo fotsny ny hevtrareo
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : MBA TE HAHATOKY ANAREO CES NY MALAGASY MANONTOLO, KA ASAKASAKAREO AMIN’IZAY ATAONAREO
Suivant Article suivant : Dr Jean Louis Robinson : hanao fanambarana lehibe eny amin’ny Magro rahampitso